छोराले गरे बाबुको ह’त्या, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ ! – Online Khabar 24
छोराले गरे बाबुको ह’त्या, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ !
November 5, 2021 November 5, 2021 by admin admin
काठमाडौं, कात्तिक १७ – शिवराज नगरपालिका–९ भगवानपुरका ४२ वर्षीय गोरे भन्ने चन्द्रबहादुर थापाको ह’त्या भएको छ। थापाको हत्या उनकै झ’ड्केला छोराले गरेको खुले’को कपि’लवस्तु प्रह’रीले जनाएको छ।
झ’ड्केला छोरा अशोक भन्ने ज’यन पुन मगरले आफू र आमालाई घरमा बस्न नदिएको भन्दै किरण महरालाई बोलाएरह ‘त्यागरेको’ खुलेको छ।
आफ्नी आमालाई दु:ख दिएको आ’पमा उनले महराको सहयोग लिएर ह’ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। थापाको कात्तिक ४ गते कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका-५ बनगाईस्थित पोखरीमा श’व फेला परेको थियो। प्रहरीले घटना शंकास्पद देखेपछि अनुस’न्धान थालिएको थियो।
त्यसदिन राति थापालाई मगरले बोलाएर स्कुटर’मा लगेका थिए। लगेपछि मगर र महरा दुबैले कु’टपि’ट गरी ह’पछि पोखरीमा श’व फालेको प्र’हरीले जनाएको छ। ‘आफू र आफ्नी आमालाई घरमा बस्न नदिएको रिसमा ह’ गरेको बयान उनले दिएका छन्,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले भने।
थापाले घरमा बस्न नदिएपछि आमा सहित मगर विजयपुर-६ मा बस्दै आएका थिए। त्यदिन महरा र मगर दुबैले मा’दक प’दार्थ सेव’न गरेका थिए। दुबैले राति १० बजे थापालाई बोलाई लु४६प ४१८९ मा चढाएर विजयनगर-५ पोखरीनजिक पुर्‍या’एका थिए। कु’टपि’ट गर्दा ज्या’न गएपछि पोखरीमा फालि’दि’एका थिए।
दुबैलाई कर्त’व्य ज्या’न मु’द्दामा थु’मा राखेर अनुसन्धान थालिएको भण्डारीले बताए। यो खबर साभार गरियको खबर हो ।
Prevनेपालका सहरमा खुले आम हिड्छन् दुनियाँकै दुर्लभ गैँडा ! हेर्नुस
nextकम्पनीको सीइओ भन्दै युवकले बनाए प्रेमिका, होटलमा भेट्न पुग्दा होस उड्यो !